झापामा ओली र सिटौलाको अवस्था कस्तो छ ? को कति बलियो ?
२०७४ असोज २६ बिहीबार १४:४०:००
काठमाडौं । स्थानीय प्रतिनिधि चयन गरेको केही महिनामै मतदातालाई अब नयाँ संरचनाअनुसार बनेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने दिन नजिकिँदैछ ।
शीर्ष नेताहरुले आफ्नो राजनीतिको आधार क्षेत्र तथा गृहजिल्लाकै मतदाताले बढी माया गर्ने ठान्दै ती क्षेत्रलाई आफ्नो रोजाईमा पार्छन् ।
यसपटक पनि सबै शीर्ष नेताहरुले आफ्नो गृहजिल्लाबाट चुनावी प्रतिष्पर्धाको तयारी गरेका छन् ।
त्यस्तै ठूला नेताहरू उमेदवार बन्ने कारण चुनावको बेला चर्चामा आउने एउटा जिल्ला हो झापा । जहाँबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला, माओवादी १ नम्बर प्रदेश संयोजक गोपाल किराँती तथा राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिंदेन लगायतका नेता चुनावी प्रतिष्पर्धाको तयारीमा छन् ।
यहाँका मतदाताले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता सिटौला पराजित गरिदिएका थिए ।
यद्यपी २०७० को चुनावमा ओली सोही क्षेत्रबाट भारी मतअन्तरले विजयी भई संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए । सिटौला पनि क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भई संविधान निमार्णको अभिभारा पुरा गर्न पाए ।
झापाबाट २०७० को निर्वाचनमा एमालेले चार तथा कांग्रेसले तीन क्षेत्र जितेको थियो । अहिले निर्धारित नयाँ संरचनाअनुसार झापामा पाँच क्षेत्र मात्रै कायम गरिएको छ ।
अब संविधानले निर्देशित गरेको नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि उपयुक्त नेता छानेर पठाउने बेला आएको छ । यो निर्वाचनमा झापाका मतदाताले कसलाई विजयी गराउलान् त ?
अहिले एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिले बाम–गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका छन् भने कांग्रेसले पनि झापामा बलियो पकड भएको राप्रपासँग तालमेल गरेको छ ।
अन्य ठाउँमा बाम गठबन्धनको तुलनामा कमजोर रहेका कांग्रेसलाई झापामा राप्रपाको पनि साथ पाउँदा राहत हुने देखिन्छ ।
आगामी निर्वाचनको परिणाम आँकलनका लागि हामीले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई मुख्य आधार बनाएका छौं । त्यसमा पनि उक्त क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने तहका वडा अध्यक्षको मतलाई विश्लेषण गरेका छौं । वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मत सम्बन्धित पार्टीले प्राप्त गरेको मत ठानेका छौं ।
यसअघिका निर्वाचनको क्षेत्र अहिले परिवर्तन भएका कारणले पनि स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडिको मतलाई आधार बनाउनु प्रभावकारी देखिँदैन ।
त्यस्तै, हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताले रोजेको पार्टी र मंसिरमा हुने निर्वाचनमा पनि सोही पार्टीको उमेदवारलाई छान्न सक्ने सम्भाव्यता बढी हुने हाम्रो विश्लेषण छ ।
झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये ७ मा एमाले, ५ मा कांग्रेस तथा ३ तहमा राप्रपा विजयी भएको थियो । वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेका मतका आधारमा गरिएको विश्लेषण यस्तो छ ।
झापा क्षेत्र नं.१ : वाम गठबन्धन १२ हजार मतले अगाडि
झापा जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ अन्तर्गत मेचीनगर नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. ९, १० तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७ पर्दछ ।
यो क्षेत्रबाट कांग्रेसले युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रतिनिधिसभाका लागि सर्वसम्मत उमेदवार सिफारिस गरेको छ भने एमालेले गोपालचन्द्र बुढाथोकीलाई अगाडि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले बोधराज दाहाल र प्रकाश भण्डारीलाई अगाडि सारेको छ ।
२०७० को निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट एमालेका रविन कोइरालाले कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गरेका थिए ।
अहिले क्षेत्र हेरफेर हुँदा यसअन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको २५ हजार ३३१ मत छ भने कांग्रेसको २२ हजार २८१ मत प्राप्त गरेको छ । यता एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीको ११ हजार ४७७ मत हुँदा राप्रपाको २ हजार ५०५ मत मात्रै छ ।
यसले गर्दा यो क्षेत्रमा बाम गठबन्धनको पक्षमा ३६ हजार ८०८ मत देखिन्छ भने कांग्रेस–राप्रपाको पक्षमा २४ हजार ७८६ मत रहेको छ । यो क्षेत्रबाट बाम गठबन्धनको तर्फबाट एमालेको उमेदवारले टिकट पाउने लगभग पक्का भएको छ । तर कांग्रेस उमेदवार शर्मा उक्त क्षेत्रमा लोकप्रिय नेता भएकाले उनले धेरै मत काट्न सक्ने आँकलन छ ।
झापा क्षेत्र नं २ मा पनि दुई पक्षको अन्तर १० हजार माथि
झापा जिल्लाको क्षेत्र नं २ अन्तर्गत अर्जुनधारा नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ तथा कन्काई नगरपालिकाको वडा नं. ८, ९ रहेका छन् ।
यो क्षेत्रमा कांग्रेसको तर्फबाट उद्धव थापा, सरिता प्रसाईँ, सुधीरकुमार शिवाकोटी र राजेश खड्का सिफारिसमा परेका छन् भने एमालेले पवित्रा निरौलाको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । माओवदीले यो क्षेत्रबाट सुरेन्द्रकुमार कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यो क्षेत्रमा एमालेको २६ हजार ९८५ र माओवादीको ७ हजार ९०० मत छ भने कांग्रेसको पक्षमा २२ हजार ८८२ तथा राप्रपाको पक्षमा ५ हजार ५३२ मत देखिएको छ । जसले गर्दा गठबन्धन कांग्रेस–राप्रपाभन्दा ११ हजार ४७१ मतले अगाडि छ ।
झापा क्षेत्र नं ३ मा कांग्रेस–राप्रपा अगाडि
झापा क्षेत्र नं ४ः गठबन्धनले कांग्रेसलाई गाह्रो
जिल्लाको क्षेत्र नं ४ अन्तर्गत झापा गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका, वडा नं. ९, गौरीगंज गाउँपालिका वडा नं. १, २, कन्काई नगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र शिवशताक्षी नगरपालिका रहेका छन् ।
यो क्षेत्रबाट कांग्रेसले देउमान थेवेको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ भने एमालेले लालप्रसाद साँवा र माओवादीले दुई जनाको नाम पठाएको छ ।
यो क्षेत्रमा एमालेको १९ हजार ४१८, माओवादीको ७ हजार २८८ मत छ भने कांग्रेसको १७ हजार ३३२ तथा राप्रपाको पक्षमा २ हजार ६२५ मत रहेको छ । यसरी स्थानीय निर्वाचनको आधारमा यहाँ पनि वाम गठबन्धन ६ हजार ७४९ मतले अगाडि छ ।
क्षेत्र नं ५ः अध्यक्ष ओलीलाई सहज
समग्रमा वडा अध्यक्षको भोटले के देखाउँछ भने एमाले एक्लैको ५ वटै क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भोट छ । एमाले–माओवादी गठबन्धन एकतर्फ र कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धन बन्दा क्षेत्र नं ३ मा कांग्रेस र राप्रपाको भोट बढी छ भने अन्य ४ क्षेत्रमा वाम गठबन्धनकै मत बढी छ । तर पछिल्लोपल्ट मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका मतदाता पनि निर्णायक हुन सक्नेछन् ।